Ma Rumaysan Kartid!! - Sababtii Layaabka Lahayd Ee Sir Alex Ferguson Ku Diiday Inuu Lasoo Saxeexdo Thierry Henry Ka Hor Intii Aanu Arsenal Tegin - Gool24.Net
Ma Rumaysan Kartid!! – Sababtii Layaabka Lahayd Ee Sir Alex Ferguson Ku Diiday Inuu Lasoo Saxeexdo Thierry Henry Ka Hor Intii Aanu Arsenal Tegin
May 22, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Thierry Henry waxa uu ku dhowaaday in gebi ahaantiiba aanu cagaha dhigin Arsenal oo uu u ahaado cadow khasaaraheeda ka shaqeeya, sababtoo ah, muu doonayn inuu tago Gunners, waxaanu jeclaa inuu Manchester United ku biiro ka hor intii aanu sabab layaab leh ku diidin Sir Alex Ferguson.
Halyeyga reer France oo lagu tilmaamo mid ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa ee Premier League ka ciyaaray, waa ciyaartoyga ugu goolasha badan taariikhda Arsenal oo siddeed sannadood oo uu u ciyaaray uu u dhaliyey 228 gool.
Guulihii ugu waaweynaa waxa uu Arsenal la gaadhay sannadihii u dhexeeyey 2001 iyo 2005, xilligaas oo afar jeer ku guuleystay abaal-marinta kabta dahabka ah shantii jeer ee la bixiyey.
Sidaas oo ay tahay, waxa uu ku sigtay in aanu Highbury iyo Emirates cagaha saarin isaga oo xidhan funaanadda Arsenal, sababtoo ah, haddii aanu Sir Alex Ferguson iska diidi lahayn inuu lasoo saxeexdo, waxa uu diyaar u ahaa inuu Old Trafford kasoo dego.
Sida uu sheegay Ned Kelly oo madaxa ammaanka Old Trafford ahaa, ayaa hadda daboolka ka qaaday sheekadan, waxaana waraysi uu siiyey telefishanka beIN Sports uu ku yidhi: “Waxaan helay telefoonka Eric Cantona walaalkii, Jean-Marie.
“Wuxuu igu yidhi, ‘Ned, u sheeg Ferguson in Thierry Henry uu doonayo inuu kooxda yimaaddo.’
“Waxay ahayd ka hor intii aanu tegin Arsenal, doorashadiisa koowaadna waxay ahayd Manchester United.
“Waxaan u tegay Alex oo aan ku idhi, ‘Maamule, waxaan hadda telefoonka kala hadlay Jean-Marie. Wuxuu ii sheegay in Henry doonayo inuu kooxda yimaaddo.'”
Intaas kaddib waxa uu Ned Kelly shaaciyey jawaabtii layaabka lahayd ee uu Sir Alex Ferguson siiyey iyo sidii uu u diiday Thirry Henry, waxaanu yidhi: “Wuxuu igu yidhi, ‘Ma dhici karto, mar walba wuu iska dhaawacmayaa.”
Kaddib Arsenal ayaa bishii January ee sannadkii 1999-kii kala soo wareegtay Juventus iyadoo kasoo bixisay lacag dhan £11 milyan oo Gini, waxaanu noqday saxeex lagu najaxay oo halyeyga kooxda loogu aqoonsaday.